Sales & Marketing Assistant Manager | Naing Group Construction Co.,Ltd
: 17 Jul 2017
1. Experienced members2. Quick Decision3. Challenges
1. Can be learned new job natures2. Higher level upon good performance
အဓိကတာဝန်/ Key Accountabilities1 ကုမ္ပဏီအတွက် ထိရောက်သော Marketing Plan များကိုရေးဆွဲ၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။2 လိုအပ်သော အရောင်းပြည့်မီရေးအတွက် အရောင်း မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။3 ပြောင်းလဲနေသော အခြေအနေကိုလိုက်၍ ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်စေရေးအတွက် မိမိ ၏ Plan များ ကို ပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
1	MBA (သို့) အရောင်းနှင့် ဈေးကွက် စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့ ၊ ဒီပလိုမာ လက်မှတ် ရရှိရ မည်။2	နယ်ခရီး ( သို့ ) နိုင်ငံခြားခရီး သွားရောက်တာဝန် ထမ်းဆောင် နိုင်ရမည်။3	မိမိဌာနအား ကောင်းမွန် ကျစ်လစ်စွာ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ရောင်းအား တိုးမြှင့်နိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်း ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရရှိရမည်။4	အသက် ၃၀ နှင့် ၃၅ ကြား သွက်လက်ထက်မြက်ပြီး လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးအတွက် ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိရမည်။5	သက်ဆိုင်ရာ တိုက်ခန်း၊ မြေယာ ရောင်းဝယ် ဆက်ဆံရေးနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၅ နှစ် ရှိရမည်။6	အင်္ဂလိပ်စာ (Intermediate Level) ရှိရမည်။7	လုပ်ငန်းသုံး ကွန်ပျူတာနှင့် Microsoft Word, Excel, Power Point အား ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Sale & Mk Manager( FMCG) ( Hotel...
Sales Manager (Elevator And Escal...
Yangon Home Co.,Ltd
Citicom Computer Sales & Service
Famous Traveller International Co...
Creative Art Billboard Services C...